कृष्णप्रसाद, नन्दप्रसाद, गंगामाया को देश खै ? | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
कृष्णप्रसाद, नन्दप्रसाद, गंगामाया को देश खै ?
माथि शिर्षकमा उल्लेख गरिएका मानव समाजका अंग हुन् । सबै नेपालीलाई थाहा भएपनि सोच्नु पर्ने कानूनी, मानविय बाध्यता सबै समाजलाई हुनुपर्दछ । पुनः स्मरणको लागि परिचय दिनु त कसलाई दिने, दर्साउने काम मात्र हो । तर्साउने काम हाम्रो होइन न्यायालयको हो । यस्तै यस्तै बदनियत बोकेका राजनीतिक पार्टी नामाकरण गरेका अपराधीहरुले न्यायमूर्ति रणबहादुर बमलाई न्यायिक शहीद बनाएका थिए । कृष्णप्रसाद ती व्यक्ति हुन् २०६१ जेठ २४ गते १७ वर्षको उमेरमा बकुलरचौक टाडीमा बर्बरता पूर्वक हत्या गरिएका व्यक्ति हुन् । उनी आफ्ना हजुरबुबा हजुरआमा भेट्न गएका उनी सैनिक जवान थिएनन् । माओ सित लड्ने लडाकु न उनी विद्रोहीका सि.आई.डी. थिए । त्यस्तै गंगामाया उनी हुन् जसको कोख पृथ्वीनारायण शाहका शालिक तोड्नेहरुले रित्तो पारेका थिए । उनी हुन् गंगा माया, जो आज न्यायको लागि अनसनमा रहेकी छन् ।
२०७१ असोज ६ गते अनसन बसेको ३ सय ३४ दिन सम्म उनका पति नन्दप्रसादको साथमा थिए । त्यसपछि पनि तरलपदार्थ खुवाई वीर अस्पतालमा उनलाई अनसनको क्रममा आज सम्म राखेको छ भने २०७१ असोज ६ गते अनसन कै क्रममा अस्पतालको आइ.सि.यू. कक्षमा मृत्यु भएका उनका पति
महाराजगञ्जको मेडिकल कलेजको लासघरमा छन्, छोरा मारी सक्यो । मार्ने माथि कारवाहीको माग दम्पत्तिले राखेका हुन् । आज एक्ली छन् वीर अस्पतालमा इन्साफ दिने कुरा हुन्छ । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि कारवाही गर्ने भए मलाई गर्नाेस् कृष्णप्रसाद मार्नेलाई कारवाही गर्न पाइदैन भनी नेपाल सरकारको हैसियतले अदालतलाई भनेको हुदा कारवाही गर्ने हिम्मत न आजको सरकारलाई छ न अदालतलाई । अदालतलाई मात्र होइन न्याय प्रणालीलाई नै कब्जा गर्ने रणनीति रहेको होइन हामी भन्न सक्दैनौं तर जसरी पनि देशमा रहेको यस्तो एक मात्र मुद्दाको छिनोफानो सरकारले गरि सक्नुपर्ने देखिन्छ । नन्दप्रसादको परिचय सर्वत्र भइसकेको भएपनि पुनः छोरा, स्वास्नीको साथमा दिनु उपयुक्त हुने हुदा उनलाई हेर्न खोज्नेको लागि हेर्न सकिने गरी सरकारले शवगृहमा राखेको छ । मृतक कृष्णप्रसाद कि आमा छोराको हत्यारा माथि कारवाहीको किटानी जोहरी दिइ आमरण अनसनमा बसेकीले हेर्न र भेट गर्न चाहनेहरुले वीर अस्पतालमा हेर्न सकिनेछ । आज सम्म कुनै कारवाही भएको छैन । न मार्नेले न्यायिक सफाई पाएको छ न कारवाहीमा सत्यतथ्य आयोग गठन भएको छ, सत्य र झुटको उसलाई पनि थाहा छैन ।
सुशिल कोइरालाको सरकारले यिनको जीवनयापनको लागि १ करोड २० लाख रुपैया दियो । उनले न्याय मागेकि हु“ पैसा माग्न अनसन बसेकी होइन भनिन् । एक स्वाभिमान बोकेका दम्पत्तिलाई सरकारले यसरी सताउनु राम्रो होइन । बरु देशैले पुनः क्रान्तिमा जानु परेपनि इन्साफ दिनैपर्छ पाउनै पर्छ । मार्नेलाई फासीको सजायको व्यवस्था छैन । केही समयको लागि जेलयात्रा मात्र हो । जेलमा त वि.पि., कृष्णप्रसाद, गणेशमान, मनमोहन अधिकारी लगायतका ठूला ठूला नेताहरु पनि बसेका हुन् । नेपालका सैनिक कर्नेल ब्रिटिसको जेलमा बसेका हुन् भने कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कारवाही गर्नमा के आपत्ति आयो ? कारवाही सुरु गर्ने हो यदि मार्नेवाला निर्दाेष भए त छुटि हाल्छन् । न्याय माग्न गंगामायाले कुन देशमा जाने ? उनको देश कुन हो खै ? उनको देश कहा“ छ ? एक विदेशी मानवले विश्वमा कही पनि इन्साफ पाउन सक्छ भने यी अनसनकारी गंगामायाले इन्साफ माग्न कहा“ जाने ? यदि यिनले इन्साफ पाएनन् भने यस देशका बुद्धिजीवि, सरकार, वकिल तथा न्यायमूर्तिहरुलाई समेत आ“च आउन सक्छ । नेपालको नाममा दाग लाग्न सक्छ र इन्साफ पाउने नेपालीको आशामा पानी फेरिन सक्छ । तसर्थ गंगामायाले इन्साफ पाउनु भनेको देशले नै इन्साफ पाउनु हो ।
← जंगली पशुतुल्य छन् नेताहरु
प्रहरी हाम्रो टोलमा अभियान सुरु →